कसले गर्यो प्रधानमन्त्री ओलीको आधिकारिक ट्वीटर ह्याण्डलबाट असम्बन्धित ट्वीट ? « Janata Samachar
कसले गर्यो प्रधानमन्त्री ओलीको आधिकारिक ट्वीटर ह्याण्डलबाट असम्बन्धित ट्वीट ?
काठमाडौं । मंगलवार प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आधिकारिक ट्वीटर ह्याण्डलबाट एउटा असम्बन्धित ट्वीट भयो ।
ट्वीटमा पत्रकार मात्रिका पौडेलले नयाँ व्यवसाय गर्न लागेकोमा ओलीको तर्फबाट शुभकामना दिइएको थियो । प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक ट्वीटर ह्याण्डलबाट असम्बन्धित ट्वीट भएपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठेको थियो ।
ट्वीटमा दुबै कोरोना संक्रमित भएको र संक्रमणमुक्त भएपछिको भेटमा ती पत्रकारले खुशी हुने योजना सुनाउँदा दुबै जना दंग भएको उल्लेख गरिएको थियो । ट्वीटसहितको फोटोमा पत्रकार पौडेल र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको फोटो रहेको छ । केपी शर्मा ओली’ नामको ट्वीटर ह्याण्डलबाट ट्वीट भएको उक्त ट्वीट अहिले भने हटाइएको छ ।
उक्त ट्वीट प्रेस सल्लाहकार थापाले गर्नुभएको खुलेको छ । तर कसरी प्रधानमन्त्रीको ट्वीटर ह्याण्डलबाट असम्बन्धित ट्वीट हुन पुग्यो भनेर भन्ने बारेमा थापाले केही प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन । यसअघि राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवासको औपचारिक ट्वीटर ह्याण्डल ह्याक भएको थियो ।